Mourinho oo ka hadlay inuu ku laabanayo Real Madrid iyo In kale, Hadal la yaab leh ayuu ka yiri!!!
Friday, April 19th, 2019 - 13:14:12
Tuesday October 23, 2018 - 07:24:00 in Wararka by Muuse Cabdi
Jose Mourinho ayaa iska diiday inuu shaqada Macallinnimo ee Real ka beddelo tababare Julen Lopetegui si uu macallin uga noqdo kooxda Real Madrid wuxuuna sheegay inuu ku faraxsanyahay Manchester United.
Macallinka xulka Portuguese ayaa la weydiiyay su’aashaas mar uu ka hadlayay kulanka United ay la qaadaneyso Juventus, isagoo shirkiisa jaraa’id ku jira haddii uu beddelayo Tababare Julen Lopetegui.
Wuxuu sheegay inuu ku faraxsanyahay halka uu joogo isla markaana uu sii wadi doono Shaqada kooxda United tan iyo inta uu jiro Qandaraaskiisa, kaliya wuxuu ka fakarayo ay yihiin inuu sii joogo Man Utd.
Ma doonayo inaan u jawaabo Suxufiyiinta Spain, ama Real Madrid iyo xataa Cristiano Ronaldo. Waxa ugu weyn waa in aan bandhig fiican ka sameyno Europe shirkan jaraa’idna waa uu ka duwanyahay Su’aasha aad I weydiisay ayuu yiri Mourinho.
"(Cristiano Ronaldo) waa mid ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa Taariikhda qofna ma dhihi karo waa qof iska Caadi ah Ronaldo."